Iyo Apple Watch 2 inogona kuunzwa munaGunyana / Gumiguru | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch 2 inogona kuiswa munaGunyana / Gumiguru
Iri igore mune akawanda nhau anotarisirwa chaizvo maererano nemaApple zvishandiso, asi kana paine imwe yatagara tichitaurira kuti iyo yechipiri vhezheni ichabuda, iyi ndiyo Apple Watch. Ichokwadi ndechekuti modhi iripo irinakidza chaizvo uye hatitende kuti Apple ichaita dhizaini shanduko kana zvakafanana, zvinongotarisirwa ndezvekuti ivo vanowedzera chimwe chemukati chemaharaware mune inopfekedzwa seGPS. Ichokwadi ndechekuti makuhwa nemishumo pamusoro peiyi inogona kuitika wachi itsva yanga iri patafura kwenguva yakareba uye ikozvino maererano neshumo DigiTimes Kuvhurwa kweApple Watch 2 kunotarisirwa munaGunyana / Gumiguru 2016.
Parizvino, zvatiri kujekesa nezvazvo ndezvekuti wachi iyi inozopedzisira yatanga kuvhurwa munguva pfupi inotevera, saka kana iri pakati pemwedzi waGunyana naGumiguru, haisi kure sekutarisirwa, asi DigiTimes yatoburitsa gwaro muna Chikumi. maakayambira kuti gungano raienderera mberi uye zvikamu zveiyi yechipiri vhezheni yeApple Watch zvakatanga kuunganidzwa kuti chigadzirwa chigadziriswe nekukurumidza sezvazvinogona.
Iye zvino hapana zvakawanda zvasara kuona kuti wachi itsva iyi ichanyatso kuvhurwa gore rino umo shanduko dzinotarisirwawo mu12,9-inch iPad Pro, chiis MacBook Pro neiyo OLED skrini zvakadii zvatakanzwa nezve mavhiki mashoma apfuura uye zviripachena iyo itsva iPhone. Muchokwadi, runyerekupe nezve iyi nyowani vhezheni yewatch inodzokorora zvekuti pakupedzisira vanozopedzisira varova zuva rekufungidzira. Ino inguva yekuenderera mberi nekuona runyerekupe muzhizha rino uye pamusoro pezvose tarisira mberi kuratidzwa kweiyo iPhone 7 iyo inogona kuunza kushamisika kunongedzwa zvakananga kune iyo nyowani MacBook Pro kana kunyangwe neyechipiri vhezheni yewachi iyo inogona kunyarara ichinzi Apple Watch S, kubvira shanduko hombe dzinotarisirwa muzvinhu zvemukati uye pamwe nekuramba kwemvura.
Tichava neApple Tarisa kudonha uku?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch 2 inogona kuiswa munaGunyana / Gumiguru
Mabhangi eAustralia anoti Apple inotyora makwikwi emahara nekuvhara kushandiswa kweiyo Chip chip
Xcode Game, mugodhi wegoridhe weApple